बेल्जियमले ब्राजिललार्इ घर फर्किन बाध्य बनायाे ! — Paschimnews.com News From Nepal
बेल्जियमले ब्राजिललार्इ घर फर्किन बाध्य बनायाे !
बेल्जियमसँग २–१ ले पराजित हुँदै दाबेदार ब्राजिल रसियामा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको छ । तर बेल्जियमभने सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकाे छ । बेल्जियमले ब्राजिल सँग २–१ गाेलकाे अन्तर राख्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकाे हाे ।
उपाधि दाबेदार मानिएको ब्राजिल पहिलो हाफमै २ गोल खान पुगेपछि विश्वकपबाट बाहिरिएको हो । दोस्रो हाफमा एक गोल फर्काए पनि विश्वकपमा अगाडि बढ्न ब्राजिलका लागि पर्याप्त भएन ।
तर त्यसपछि गोल हुन नसक्दा ब्राजिल २–१ ले पराजित हुँदै क्वार्टर फाइनलबाटै घर फर्कियो ।